भुलेर पनि कहिल्यै अरूलाई नभनुहोस यस्ता ४ कुराहरू नत्र पछुताउनु पर्ला… – Media Np Online
मुख्य पृष्ठ /News/भुलेर पनि कहिल्यै अरूलाई नभनुहोस यस्ता ४ कुराहरू नत्र पछुताउनु पर्ला…
३. पुरुषले आफ्नो घरको भित्री कुरा पनि बाहिर कसैलाई बताउन नहुने चाणक्यले भनेका छन् । विशेषगरी आफ्नी पत्नीको चरित्रका विषयमा अर्कोसँग कुनै पनि टिप्पणी गर्नु हुँदैन । यसो गर्नाले पुरुषको प्रतिष्ठा र सम्मानको नाश हुन्छ ।४. चाणक्यले भनेका छन्– जीवनमा मिलेको अपमानलाई कहिल्यै पनि अरूका सामुन्ने चर्चाको विषय बनाउनु हुँदैन । हुन सक्छ, तपाईं अरूलाई भनेर मनको भावना पोख्न चाहनुहुन्छ तर सुन्ने मानिसले यो कुरा दोस्रो मानिसलाई बतायो भने अपमान झन बढ्न सक्छ । यसकारण अपमानसँग जोडिएका घटना कहिल्यै कसैसँग बताउनु हुँदैन ।
मेरो क्षेत्रमा कोरोना पोजिभिटको कन्ट्याक्ट् ट्रेसिङ पछ्याउँदा आत्तिएँ : गगन थापा